WPC PVC FOAM လိုင်းရောင်းချသူများနှင့် စက်ရုံ - တရုတ် WPC PVC FOAM လိုင်းထုတ်လုပ်သူများ
PVC ကြော်ငြာပြသမှု Foam Core အခမဲ့ Foam ဘုတ်လိုင်း
PVC ပြကွက်စာရွက်သည် သံချေးတက်ခြင်း၊ အစိုဓာတ်ခံနိုင်ခြင်း၊ အနာခံနိုင်ခြင်း၊ စုပ်ယူနိုင်ခြင်း မရှိသော၊ တူးဖော်နိုင်သော၊ မြင်နိုင်သော၊ စီမံနိုင်သော၊ အပူချိန်ထိန်းရလွယ်ကူခြင်း၊ ပူသောကွေးညွှတ်ခြင်းစသည့် လက္ခဏာများပါရှိသည်၊ ထို့ကြောင့် ၎င်းကို ပရိဘောဂများ၊ ဗီဒိုများ၊ ရေချိုးခန်းများတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုကြသည်။ ဗီဒိုများ၊ ပြပွဲစင်ဘုတ်များ၊ သေတ္တာအမာခံအလွှာများ၊ အိမ်တွင်းနှင့် ပြင်ပအလှဆင်ခြင်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများ၊ ဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းနှင့် အခြားနယ်ပယ်များ၊ ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်များ၊ ပုံနှိပ်ခြင်း၊ ပိုးထည်စခရင်၊ အင်ဂျတ်၊ ကွန်ပျူတာစာစီစာရိုက်၊ အီလက်ထရွန်နစ်တူရိယာထုတ်ကုန်ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများ။
ထုတ်ကုန်သတ်မှတ်ချက် 1220*2440mm၊ 1560*3050mm၊ 2050*3050mm
ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းအမြန်နှုန်း 2-4m/min ။
မော်တာပါဝါ 75kw -90kw
အရောင် : အမျိုးမျိုး
ဤလိုင်းသည် အကျယ် 900-1220mm၊ အထူ 12-25mm ဖြင့် PVC Board ကို ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွင် shuttering board အဖြစ် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုကြသည်။
PVC အဆောက်အဦပုံစံ၏ အင်္ဂါရပ်များနှင့် အားသာချက်များ- 1. PVC အဆောက်အဦ ပုံစံပလိတ်၏ ကုန်ကြမ်းမှာ PVC SG5 ဖြစ်ပြီး၊ ဘုတ်သည် B1 flame retardant ဖြစ်ပြီး မီးဘေးအန္တရာယ်၊ အပူချိန်မြင့်မားသော ခံနိုင်ရည်ရှိမှုနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာ ဘေးကင်းမှုတို့ကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်။သံမဏိပုံစံပလိတ်နှင့် ဝါး-သစ်သားအထပ်သားကို အစားထိုးသည့် ပုံစံအသစ်တစ်မျိုးသည် အစိုဓာတ်ခံနိုင်သော၊ မှိုဒဏ်ခံနိုင်မှု၊ ချေးခံနိုင်ရည်နှင့် စုပ်ယူမှုမရှိသော ဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်။2. စေးကပ်မှုမရှိသော ဘိလပ်မြေ၊ ဆောက်လုပ်ရေးပြီးနောက် ပြိုကျလွယ်ခြင်း၊ ပုံပျက်ခြင်း မရှိပါ။3. ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသည်၊ အရည်အသွေးကောင်းမွန်သည်၊ ၎င်းနှင့်တည်ဆောက်ထားသောအဆောက်အဦ၏မျက်နှာပြင်သည်ချောမွေ့ပြီးအပြား၊ သွန်းလောင်းခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုကောင်းမွန်သည်၊ ဆင့်ပွားပြုပြင်မွမ်းမံရန်မလိုအပ်ပါ။4. အလှည့်ကျအသုံးပြုမှုအကြိမ်ရေ 50 ကျော်၊ တာရှည်ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်း၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောတည်ဆောက်မှုစွမ်းဆောင်ရည်၊ အဆင်ပြေသောသိုလှောင်မှု၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်တည်ဆောက်မှုတို့ထက်ပိုမိုရောက်ရှိနိုင်သည်။5. စွန့်ပစ်ပစ္စည်းပုံစံပလိတ်ကို ထုတ်လုပ်မှုနှင့် အသုံးချရန်နှင့် အခြားအားသာချက်များအတွက် ချေမှုန်းနိုင်ပြီး၊ အရင်းအမြစ်များကို ချွေတာနိုင်ပြီး “အစိမ်းရောင်စက်မှုလုပ်ငန်း” ၏ လိုအပ်ချက်များနှင့် ပြည့်မီနိုင်သည်။6. pVC အဆောက်အဦပုံစံပလိတ်တွင် အသံလျှပ်ကာ၊ အသံစုပ်ယူမှု၊ အပူလျှပ်ကာ၊ အပူကိုထိန်းသိမ်းခြင်းစသည်ဖြင့် ဂုဏ်သတ္တိများရှိပြီး တုန်လှုပ်မှုဒဏ်ခံနိုင်သော အာနိသင်များရှိသည်။7. သစ်သားထည့်ခြင်းနည်းလမ်းကို တူးဖော်ခြင်း၊ လွှ၊ လက်သည်းပြုလုပ်ခြင်းကဲ့သို့သော သစ်သားကဲ့သို့ စီမံဆောင်ရွက်နိုင်သည့် အမျိုးမျိုးသော ကုသမှုများတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းကို ယေဘူယျလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရ အခြား PVC ပစ္စည်းများနှင့် ချည်နှောင်ထားနိုင်သောကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်။ အလယ်တန်းလုပ်ဆောင်ခြင်းလုပ်ဆောင်ရန် ဆောက်လုပ်ရေးဆိုက်တွင် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသည်။
PVC/WPC ရေမြှုပ်ဘုတ်သည် ယခုအခါ ပရိဘောဂဘုတ်အဖွဲ့တွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုသည့် အကောင်းဆုံးပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်လာသည်။ကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် အားသာချက်များဖြင့် အိမ်အလှဆင်ခြင်းအတွက် ဆွဲဆောင်မှုရှိသော၊ ခေတ်ဆန်သော၊ တာရှည်ခံပြီး အံဝင်ခွင်ကျရှိသော ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်သည်။ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းတွင် အထူးဝက်အူနှစ်ထပ်ပေါင်းထုတ်စက်၊ extrusion die၊ ဒေါင်လိုက်သုံးကြိတ်စက်နှင့် အရန်စက်တို့ ပါဝင်သည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုမ္ပဏီသည် ဖော်မြူလာနှင့် နည်းပညာအစုံအလင်ကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းတစ်ခုလုံးသည် ကြီးမားသောထွက်ရှိမှု၊ တည်ငြိမ်သော extrusio ၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများရှိသည်။
သစ်သား-ပလပ်စတစ်ဘုတ်အဖွဲ့သည် အခြေခံပစ္စည်းအဖြစ်၊ သာမိုပလတ်စတစ်ပေါ်လီမာပစ္စည်းများ (ပလပ်စတစ်) နှင့် ပြုပြင်ခြင်းဆိုင်ရာအကူအညီများ စသည်တို့ကို တစ်ပုံစံတည်း ရောနှောကာ မှိုစက်ဖြင့် အပူပေးပြီး ထုတ်ယူသည်။သစ်သားနှင့် ပလပ်စတစ်၏ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် လက္ခဏာများပါရှိသော အလှဆင်ပစ္စည်းများသည် သစ်သားနှင့် ပလပ်စတစ်ကို အစားထိုးနိုင်သော နည်းပညာမြင့်၊ အစိမ်းရောင်နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတရှိသော ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများအသစ်ဖြစ်သည်။1. ရေစိုခံ ပိုးမွှား...